Usuku: 4 Okthoba 2019
UMasipala waseMalatya Metropolitan uqeda ukwengeza nokwakhiwa kwemigwaqo yaseBattalgazi Atabey İskele. Ngaphezu kokusebenza kwemigwaqo emisha, uMasipala Metropolitan wenze ukuvuselelwa kwemigwaqo ekhona ngokuhambisana namazinga nomgwaqo wase-Atabey Ferry Port esifundeni sakwa-Old Malatya. [Okuningi ...]
UMasipala wase-Ordu Metropolitan usuqalile isicelo seRoller Compacted Concrete Road (RCC) enikezela ukonga izindleko uma kuqhathaniswa nemigwaqo yokhonkolo kanye ne-asphalt esifundeni sase-Eskipazar esifundeni sase-Altınordu, kodwa esiqine kakhulu ngokuya ngokuqina. Kwenziwe isicelo okokuqala ku-Ordu [Okuningi ...]
ETurkey Çambaşı umehluko emangalisayo lokuba esiseduzane kolwandle elungiselela ski sonyaka Ski 2019-2020. I-Çambaşı Kayak etholakala kuma-2000 acres endaweni ephakeme ye-650 nguMasipala wase-Ordu Metropolitan futhi itholakala ebangeni le-52 km ukusuka enkabeni yedolobha. [Okuningi ...]
Imikhawulo yejubane ebuyekeziwe yomzila Ngesinqumo se-Antalya Metropolitan Municipality Transportation Coordination Center (UKOME), imingcele yejubane emigwaqweni yasemadolobheni isiphinde yanqunywa. Umkhawulo wejubane wamakhilomitha we-70 amakhilomitha we82 emigwaqweni ethile nama-boulevards asenkabeni yedolobha. [Okuningi ...]
Isikhungo Sokwakhiwa Kwebhasi iBodrum Sisebenza Ngokuqhubeka
IMeya kaMasipala waseMuqula Metropolitan U-Osman Gürün wenza izivivinyo eBodrum Bus Station, esakhiwa. Kumhlaba wamamitha-skwele we-30 ayizinkulungwane ezingama-759 eTorba Junction eBodrum, ukwakhiwa kuzoqhubeka futhi kuzobiza i-74 Million TL. [Okuningi ...]
I-Haydarpaşa ne-Sirkeci Railway Station Tender! .. Bheka Ubani Ofaka Ithenda Yokubhida! ..
Ithenda yokuqashwa kwezinye izindawo ezindaweni ezisesiteshini saseHaydarpaşa naseSirkeci, uMnyango WezokuThutha angeke ivume ukubamba iqhaza kwe-IMM ngokuthi ithi “ukwehlisa”. I-IMM ne-Hezarfen Aviation basala ekugcineni kwethenda. Ikhomishini yethenda kungakapheli izinsuku ze-15 zamaqembu [Okuningi ...]
Konya, Turkey kuyoba isibonelo Ibhayisikili Indlela
Uğur İbrahim Altay, iMeya kaMasipala waseKonya Metropolitan, wabamba iqhaza eMarmara International City Forum (MARUF) eyenzeka e-Istanbul Congress Center. IMeya u-Altay ichaze uKonya ne-Bicycle Master Plan esithangamini esizoba phakathi kuka-Okthoba 1-2-3 ngesiqubulo esithi “Amadolobha Akhiqiza Izixazululo,. [Okuningi ...]
Usuku lwe-Asphalt Night ne-Sidewalk Isebenza e-Izmit
UMasipala waseKocaeli Metropolitan, esifundeni i-Izmit Yahya Kaptan Neighborhood Democracy Street wenza umsebenzi wokulungisa imigwaqo nokulungisa wona. Emisebenzini eyenziwe nguMnyango Wezindaba Zesayensi, amaqembu, i-asphalt patch ebusuku, ngenkathi umgwaqo oseceleni ukhiqiza. asphalt [Okuningi ...]
Ukuvikela Iphrojekthi Kwimboni Yezokuvikela Amakhaya
Amaphrojekthi wasekhaya nowezwe emkhakheni wama-radar wezempi nokuphepha emngceleni, 2. Kwethulwe kwiNgqungquthela Yezokuphepha Yezempi Yezwekazi kanye ne-Border Security Summit 2, okuwukuphela komcimbi okhethekile emkhakheni wama-radar wezempi nokuphepha kwemingcele. I-International Milad Radar ne-Border [Okuningi ...]
Umsebenzi we-E-5 Works uzoqhutshwa ngaphakathi kwe-Kurbağalıdere Ukuzala Projekthi
Ngokwesilinganiso seKurbağalıdere Improvement Project, isigaba sesigaba somfula sizokwenziwa endaweni ephakathi kweGöztepe Bridge Interchange ne-Optimum Shopping Mall. Ukuphothulwa kwesiteji kuzophothulwa ngaphakathi komkhawulo wethrafikhi yomsebenzi kuzoqondiswa kumgwaqo omusha wenkonzo. I-ISKI, ngomunye wababambisene nabo kuMasipala wase-Istanbul Metropolitan [Okuningi ...]
Kusuka Kwinkonzo, Channel Istanbul Alert
UMnyango Wezamahlathi Nezamanzi, iphrojekthi yeCanal Istanbul, iTerkos Lake kanye nedamu leSazlıdere zizokhubazeka ngokuthi i-Istanbul ingahle iqhubeke namanzi. Iphini Likasihlalo We-CHP uMuharrem Erkek; imvelo, isihlahla, izilwane, ujusi ngenjongo yokuqasha amandla, [Okuningi ...]
IBursa Teleferik A.Ş. IMenenja-jikelele, uBurhan Ozgumus, u-1 million TL ukufumbathisa iMeya ukuthola amahemuhemu lawo abekwa phambili, wathi awalona iqiniso, esho. U-Ozgumus, uthembise ngesikhathi evakashele usihlalo weSifundazwe saseSakarya CHP ngosuku olwedlule [Okuningi ...]
Iphupho le ropeway ukuthi ezokuvakasha zeKartepe neKocaeli bezilinde iminyaka engaba ngu-50 liphinde libe ngenye intwasahlobo. I-10 ngo-December 2018 ngeke ize ifike ku-2020, okuwusuku lokulethwa kwe-ropeway ngomkhosi obabazekayo. [Okuningi ...]
Umbusi wase-Çanakkale u-Orhan Tavlı, umlando we-18 Mashi 2017 owabekwa nguMongameli Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Bridge indawo eyakhiwe. Abahloli Abakhulu Bezakhiwo Nezakhiwo Naci Çetin Akder no-Ali Alper Orkun, Tahir Şahin, uMbusi Wesifunda weLfallki [Okuningi ...]
Izitimela ezifakaza ngokusungulwa kweRiphabhulikhi
Umphathi we-TCDD General Ali İhsan Uygun unesihloko esithi Rails Ufakaza Ukusungulwa KweRiphabhuliki yethu ısında ushicilelwe kumagazini ka-Okthoba wephephabhuku iRaillife. Nayi i-athikili ka-Manejala we-TCDD IGERGER UJGUN “3 Septhemba Kusukela kuqale umsebenzi wokuqala kulayini we-İzmir-Aydın e-1856 [Okuningi ...]
Kuphelile umugqa we-Ankara Sivas YHT
Kumagazini ka-Okthoba womagazini we-Raillife, uMehmet Cahit Turhan, onguNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda, ushicilele i-athikili enesihloko esithi “Ankara Sivas YHT Line Ended Hatt. KUSUKELA KU-MECER TURHAN olarak NjengoNgqongqoshe, inqubomgomo yethu yokuhamba phambili kojantshi kusukela ngo-2003 [Okuningi ...]
IBTS, Inesibopho Sezingozi Zesitimela!
Izingozi zesitimela nokufa kwabantu abasebenza ngemishini ekukhishweni kwabezindaba ze-United Transport Emp abasebenzies Union Izmir Branch, zifuna ukuthi labo ababalwa ngaphambi kwenkantolo bahluleke. Isitatimende esenziwe phambi kweHalkapınar Warehouse, uNobhala weGatsheni weBTS Sensikası Izmir uMehti Seyhan usifundile. [Okuningi ...]
Umshushisi uGalip Yılmaz Özkurşun, obebheka icala lenhlekelele yesitimela e-Çorlu, lapho abakwa-25 balahlekelwa yimpilo yakhe, ubhekene no-N oqondise kwabezomthetho ngendlela eyaziyo ukuthi yi-gazeteci yentatheli uMalefa Hoş obelokhu eyibhekele kakhulu le nhlekelele kusukela ekuqaleni. [Okuningi ...]
Konya kaMasipala Isigaba sokuqala se-ithenda ngo-Okthoba 2 2019 ngoLwesithathu e Ankara, Turkey, kude eliphakeme uhambisane "isimemo" senziwe ngendlela inqubo futhi ngaphandle kwesaziso. Umqondisi Jikelele Wokutshalwa Kwezingqalasizinda ngaphansi koMnyango Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda [Okuningi ...]
UNgqongqoshe Wezokuvikela Kuzwelonke uHulusi Akar kanye noNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezingqalasizinda Mehmet Cahit Turhan bahambele eKayseri. Kwabanjwa umhlangano nokubamba iqhaza kwabo bobabili oNgqongqoshe futhi kwaqhutshwa nguMasipala Wamadolobha Amakhulu. UMemduh Büyükkılıç uyikho [Okuningi ...]